Xildhibaanno ka tirsan Hirshabelle oo maanta booqanaya dadka ay saameyen fatahadaha Beledweyn – Kalfadhi
Wafdi isugu jira xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabelle iyo masuuliyiin kale ayaa saakay tagaya magaalada Beledweyn oo ay saameyen fatahaado xoogan,sida ay tabisay idaacada Goob Joog.
Ujeedka booqashada xildhibaannada ayaa ah in ay soo kormeeran xaafadaha ay biyaha galen ee magaalada halkasi oo ay ka barakacen qoysas badan.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hoggaamin doonna wafdigaasi.
Xildhibaanno kale oo ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sido kale kamid ah wafdiga ku wajahan Beledweyn si ay uga qeyb qatan gurmadka loo fidinayo dadka rayidka ah.
Hey’addaha gurmadka iyo madaxda dowladda ayaa beryahan si joogto ah u booqanayay magaalada xilli ay weli guryo la’aan yihiin boqollaal kun oo qoys.